Ingeniso yenqwelomoya yengeniso encedisayo kwiirandi ezinkulu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Ingeniso yenqwelomoya yengeniso encedisayo kwiirandi ezinkulu
Julayi 14, 2015
Oku kuyothusa ngokwenene kushishino lokhenketho nokhenketho.
Oku akumangalisi kushishino lokhenketho nokhenketho. Ingeniso yenqwelomoya yenqwelomoya iqhubekile nokukhula kunyaka wesibhozo ngokulandelelana, ngokutsho kweIdeaWorksCompany, elandelele iinqwelomoya ezingama-63 kwaye yaphanda iifilitha zemali ezenziwa ziinqwelomoya eziyi-130 kwihlabathi liphela.
Ii-Airlines ezilandelwa ngumbutho wokubonisana zichaze ukwanda okukhulu kwingeniso efunyenwe kwimisebenzi yentengiso kunye nentengiso yeenkonzo zecala kunye neemayile ezihamba rhoqo.
Ingeniso eyongezelelweyo yomgibeli ngamnye phakathi kweenqwelomoya ezingama-63 yi- $ 17.49, eyi-8.5 yeepesenti ngaphezulu kwesiphumo sango-2013, kwaye umsebenzi phakathi kwabaphethe ixabiso eliphantsi utsibe ngaphezulu kwe- $ 2.9 yezigidigidi, okanye iipesenti ezingama-32.8.
"Ingeniso eyongezelelekileyo luphawu olubonakalayo olubonakalayo lokuphumelela kwezorhwebo, kwaye inegalelo elikhulu kumgangatho ophantsi weenqwelomoya emhlabeni wonke," utshilo uMichael Cunningham, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo eCarTrawler.
Iinqwelo-moya zase-US zilawula phezulu kwetafile, kunye nee-United Airlines ezivelise eyona mali inkulu yengeniso ngo-2014- ngaphezulu kwe- $ 5.86 yezigidigidi iyonke. I-American / US Airways ibekwe kwindawo yesibini, ngenxa yokudityaniswa kwezi zimbini, ngelixa iDelta ikwindawo yesithathu, ivelise ngaphezulu kwe- $ 3.2 yezigidigidi ngo-2014.
Iinqwelomoya zase-Yurophu ziqala ukuhluza ngaphakathi, i-Air France / i-KLM ithathe indawo yesine ngeniso encedisayo engaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi ngo-2014, kunye ne-Irish LCC Ryanair inqanaba lesihlanu kwitafile, ivelisa phantse i-2 yezigidigidi zeerandi kwingeniso encedisayo- inyuke ngaphezulu kwe- $ 210 yezigidi ukusuka kunyaka ophelileyo.
"Imfihlelo yokuvula lo msinga wengeniso inokufumaneka kwidatha eveliswa ngabathengi ngayo yonke intengiselwano. Akusekho ukugcinwa kwabaphethe ixabiso eliphantsi- yinto exhamlayo kuzo zonke iinqwelomoya. Umbuzo ayinguye owenzayo, yindlela owenziwa ngayo kakuhle, ”wongeze watsho uMnu.
Abathwali abaphezulu abalishumi bafumene ukonyuka phantse kwe- $ 4.6 yezigidigidi ngonyaka omnye, oko kubonisa ukukhula kwengeniso ngaphezulu kweepesenti ezingama-22.5. Ikhadi lokuthenga ngetyala laseMelika lavelisa ingeniso ye- $ 624 yezigidi, ikakhulu ngenxa yokuphuculwa okwenziwe kubudlelwane bayo neCitibank, ngelixa inkqubo yoReward Rewards yoMzantsi-Afrika iqhubeka nokwenza ingeniso enkulu ngemali ephantse ifike kwizigidi ezingama-400 zeerandi.
Ngokubhekisele kwimimandla yehlabathi, Amazwe aseMelika avelisa esona sixa sikhulu sengeniso encedisayo iyonke, ngesabelo sama-56 eepesenti kwihlabathi liphela, ngelixa iYurophu neRussia zimi kuma-29 eepesenti kunyaka ka-2014. uMbindi Mpuma kunye ne-Afrika benza iipesenti ezincinci kwihlabathi liphela.
Xa ingeniso encedisayo ilinganiswa njengepesenti yengeniso, abathwali beendleko eziphantsi banyukela phezulu kwiitshathi. Ukusukela ngo-2011, indawo ephezulu ibibanjwe yi-US Airlines esekwe e-US, ingeniso yayo encedisayo yenze iipesenti ezingama-38.7 zerhafu iyonke. I-Wizz Air kunye ne-Allegiant ibekwe kwindawo yesibini neyesithathu ngokwahlukeneyo, ngelixa iJet2.com kunye neRyanair zibekwe kwindawo yesine neyesihlanu ngokwemirhumo encedisayo njengepesenti yengeniso.
Le nyaniso ikhokelela kwii-LCCs ngakumbi ekwamkeleni iindlela ezitsala abahambi beshishini elinemveliso ephezulu. I-Ryanair yenze utshintsho olukhulu kwisicwangciso sayo seshishini ngokongeza ii-frequency ezininzi kwiindlela ezikhethiweyo, ngokudala imali yokuhamba kunye nezinto ezinamashishini, kunye nokujolisa kwabahambi kwezorhwebo ngephulo lokuthengisa.
Ngokwengeniso encedisayo yomgibeli ngamnye, iJet2.com ibekwa kwelona liphezulu, ngomndilili wenkcitho yomthengi ephawulwe kwi $ 56.28 ngomhambi ngamnye ngo-2014. I-Air Airlines ikwindawo ephezulu kwakhona kwindawo yesibini, nangona iQantas Airways ikwindawo yesithathu kwingeniso encedisayo umkhweli.
Iinqwelomoya ezininzi ezidweliswe kwezi zilishumi ziphakamileyo ezinje ngeQantas ziya kuqhubeka nokubona inkqubela phambili yengeniso ngenxa yolwabiwo olutsha lwezinto ezongezelelekileyo ngokuzikhethela ngokusebenzisa iiarhente zokuhamba kunye nabacwangcisi bokuhamba. I-Alaska, i-Korean Air, i-Qantas, i-United kunye ne-Virgin Atlantic zonke zikwinqanaba leshumi, kwaye banezibonelelo ngaphezulu kwe-LCCs kuba kudala bethembele kwiinkqubo zokusasazwa kwehlabathi (GDS).
Ukutshintsha ukuthengiswa kwezinto ze-la nge-GDS kube yingxaki ngenxa yemicimbi yezobuchwephesha kunye nekhontrakthi, kodwa inkqubela phambili iyenzeka ngokukhawuleza. Iinyanda zeFare zithengisa kakhulu nge-GDS kwaye ziya zithandwa ngakumbi kwiinqwelomoya.
Ngokwe-IdeaWorksCompany, "iinyanda zeemveliso zidibanisa izinto ezithandwayo kwaye zilingwe abathengi ngokonga ngendlela efanayo neyabaphathi benethiwekhi zehlabathi kunye nee-LCCs njengoko ezi ntlobo zimbini zeenqwelo moya zisenza isidlo kwindawo yokutyela iMcDonald. Le ibe yeyona ndlela iphambili yokukhuphisana. ”
I-eTN liqabane leendaba kwiNdlela.
Iindawo ekuhlala kuzo iMarriott eMexico zibhengeza uMlawuli omtsha ...
I-Bahamas ibhiyozela ukuqala kweCrystal Cruises '...
Isitywina esitsha esilula soKhenketho oluKhuselekileyo sisitshixo sokufumana ...
Ukuhamba kwe-US ukuya eYurophu: UMongameli wakhupha iiNtetho kwi ...
Ukoyika i-COVID-19 eyahlukileyo ekwindla
ILufthansa ithumela ii-Airbus A321s ngokusisigxina ...